अशोक दर्जीको नयाँ घरमा युट्युबको लोगो राखिने ! – Everest Dainik – News from Nepal
अशोक दर्जीको नयाँ घरमा युट्युबको लोगो राखिने !
काठमाडौं, असार २२ । अहिले युट्युबमा धेरै खोजिएका बाल गायक अशोक दर्जीको चर्चा चुलिएकै छ । उनी विभिन्न कार्यक्रममा गित गाउँनेदेखि अन्तर्वार्ता दिनमा निकै व्यस्त छन् । प्रतिभाको उचित कदर गर्दै धेरै स्रोता दर्शकको अपार माया पाएका अशोकको झापामा अहिले घर पनि निर्माण हुँदै छ । उनको यो घर निर्माण गर्नमा गायक टंक बुढाथोकीको ठूलो हात छ ।
झापाको दमकमा निर्माण भइरहेको अशोकको घरमा अब युट्युबको लोगो राखिने भएको छ । यस्तो किन त ? गायक बुढाथोकीले भनेका छन्, युट्युबबाट नै उनले यति धेरै चर्चा कमाए त्यसै कारण । युवा मन नेपाल युट्युब च्यानलसँगको कुराकानीका क्रममा गायक बुढाथोकीले यस्तो बताएका हुन् ।
सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगकर्ता र यसको सही सदुपयोगले गर्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले पनि लोगो राख्न लागेको उनले बताए । हाल अशोकको घर निर्माण कार्यको निरीक्षणमा व्यस्त गायक बुढाथोकीले सबैको साथ सहयोग र मायाले गर्दा नै अशोकको यो सफलता पाएको पनि गायक बुढाथोकीले बताएका छन् । उनले घर निर्माणको आधा काम सकिएको र झरेली समस्या नपारेको खण्डमा निर्माण कार्य तोकीएको समयमा नै सकिने पनि बताए ।
ट्याग्स: Ashok Darji, Tank budhathoki